Knowledge | Phone Myint Khaing's Blog
မြန်မာနိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် လူငယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
Posted on September 23, 2011 by Phone Myint Khaing	2	(ရန်ကုန်တိုင်းမ် ဂျာနယ်၏ Perspective ကဏ္ဍအောက်တွင် မေးမြန်းဖော်ပြခြင်းခံရသည်ကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲမှုများသည် ဆက်တိုက် ဆိုသလို အလျင်အမြန် တိုးတက် ပြောင်းလဲလာနေသည်ကို တွေ့နေရပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတွင် အုပ်ချုပ်လာသော စစ်အစိုးရမှ ၂၀၁၀တွင် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရကို ကူးပြောင်းလာခဲ့ရာတွင် အနှစ်၂၀ကျော် အချိန်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းလာသည် ဖြစ်ရာ ယင်းသက်တမ်းသည် လူငယ်မျိုးဆက် တစ်ခု၏ နှစ်သက်တမ်းတို တစ်ခုဟုပင် ပြော၍ ရပေသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင် လူငယ်များသည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်ကို လွတ်လပ်ရေး ရယူရန် ကြိုးစားခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှသည် ခေတ်အဆက်ဆက် ဖြတ်သန်းရာ တစ်လျှောက်တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။
သို့သော် ယနေ့လူငယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသား နိုင်ငံရေး၊ ပါတီနိုင်ငံရေးနှင့် ထိတွေ့မှုနည်းပါးသည်ဟု ရှုမြင်ကြသူများ ရှိနေသလို နိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲမှုများကို တစိုက်မတ်မတ်လေ့လာနေသူ လူငယ်များ ရှိနေကြသည်။ Continue reading →
Posted in Article, Knowledge, perspective	| Tagged Burma, Interview, myanmar, Myanmar Politics, politics	|2Replies
Why not Myanmar Unicode!
Posted on December 29, 2010 by Phone Myint Khaing	21	ကျွန်တော်​တို့ အိုင်​တီ​လောက​မှာ မ​ပြီးပြတ်​သေး​တဲ့ ကိစ္စ​ရပ်​ရှိ​နေ​သေး​တယ် ဆို​ရင် အဲ့​ဒါ​ဟာ ယူ​နီ​ကုဒ် ကိစ္စ​ပါ။ တစ်​ခါ​တစ်​လေ ဖို​ရမ်​တွေ​မှာ ဒီ​ယူ​နီ​ကုဒ် ကိစ္စ​ဟာ စကားလုံး တိုက်​ပွဲ​အသွင်​တောင် ဆောင်​လာ​ပါ​တယ်။ ဒါ​ပေ​မယ့် ဒါ​ကို တစ်​ချို့ ပညာ​ရှင်​တွေ​ကိုယ်တိုင်​က မည်သည်​က စံ​ဖြစ်​သည်​ကို သိ​နေ​လျက် နှာစေး​နေ​တော့ ကျန်​တဲ့ မ​သိ​တ​သိ လူ​များ​က စနစ်​တစ်​ခု​ကို ဆိုလို​ခြင်း​က​နေ မြန်မာ​ဖောင့် တိုက်​ပွဲ​လို့ လွဲ​မှား​စွာ မြင်​လာ​ကြ​တာ​က စ​တာ​ပါ​ပဲ။
ဘာသာ​စကား တစ်​ခု​ရဲ့ တန်ဖိုး
အရင်​ဆုံး ကျွန်တော် ဝန်ခံ​ရ​ရင် ကျွန်တော်​က ပညာ​ရှင်​တစ်​ယောက် မဟုတ်​ပါ​ဘူး အသုံးပြု​သူ​တစ်​ယောက် ဖြစ်​ပါ​တယ်။(ဒါ​ကြောင့် ကျွန်တော် ဆက်​လက်ဖော်​ပြ​မယ့် အကြောင်းအရာ​တွေ​မှာ အသုံးပြု​သူ တစ်​ယောက် အမြင်​နဲ့ ကျွန်တော်​့ အတွေ့​ကြုံ​ကို​ပဲ အခြေ​ခံ​ပြီး​ရေး​မှာ​ပါ။ ကျွန်တော် မည်​သည့် ပုဂ္ဂိုလ်​ကို​မှ တိုက်ခိုက်​လို​တဲ့ ဆန္ဒ​မ​ရှိ​ဘူး​ဆို​တာ ပြော​လို​ပါ​တယ်။) ကျွန်တော်​တို့ မြန်မာ​ဘ​လော့​တွေ စ​တင်ပေါ်​ပေါက်​ကာ​စ တုန်း​က မြန်မာ​လို​ရေး​လို့ မ​ရ​တော့ jpg ဖိုင်​တွေပေါ်​မှာ ဝင်း​ဖောင့်​နဲ့ မြန်မာ​လို​ရေး​ပြီး တင်​ခဲ့​ကြ​တယ်။ Continue reading →
Posted in Article, Knowledge, Technology	| Tagged Myanmar NLP, Myanmar Unicode, Myanmar3, Zawgyi	| 21 Replies
Posted on February 7, 2010 by Phone Myint Khaing	4	SPIP
SPIP အကြောင်းကို ကျွန်တော် Barcamp မှာတုန်းကလဲ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာ မသိလိုက်တဲ့သူတွေ ရှိသေးလို့ ထပ်ပြီး ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ Barcamp မှာဝေတဲ့ စီဒီထဲမှာ လဲ Demonstration လုပ်ပြထားပါတယ်။ (ကမန်းကတန်း လုပ်လိုက်ရတော့ capture software သိပ်မကောင်းလို့ ရုပ်ထွက် တော်တော်ဝါးသွားတယ်။) အခု SPIP အကြောင်း နည်းနည်း ထပ်ရှင်းပြ ပါမယ်။
SPIP ဆိုတာ ပြင်သစ်နိုင်ငံက ထုတ်တဲ့ CMS တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အရှည်ကောက် (အင်္ဂလိပ်လိုတိုက်ရိုက်တော့ မဟုတ်ပါ) Publication System for Internet Sharing ဖြစ်ပါတယ်။ SPIP ဆိုတဲ့ အတိုကောက် စာလုံးတွေချည်းပဲ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ရှဉ့်ပါတဲ့။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ လိုဂိုမှာ ရှဉ့်ပုံလေး ဖြစ်နေတာပါ။ အထူးသဖြင့် စပစ်ဟာ သတင်းဆိုက် တွေ အတွက် သင့်လျှော်တဲ့ CMS တစ်မျိုးပါပဲ။ သူက အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မည်သည့် အပိုဆောင်း plug-in အတွက်မှ ပိုက်ဆံပေး စရာ မလိုပါဘူး။ သူ့ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် နည်းပညာ အထွေအထူး တတ်မြောက်စရာ မလိုပါဘူး။ ဘလော့အသုံးပြုဖူးသူ၊ ဝက်ဘ်အကြောင်း နည်းနည်းပါးပါး သိသူလောက် ဆိုရင်တောင် အလွယ်တကူ အသုံးပြုတတ်မှာပါ။ နောက်တစ်ခုက download ပေးထားတဲ့ package မှာလဲ မြန်မာဘာသာ(မြန်မာယူနီကုဒ်) ပါဝင်ပါတယ် (ဆိုက်မှာ အသုံးပြုတဲ့အခါ ဇော်ဂျီနဲ့လဲ သုံးလို့ရပါတယ်။ တော်ကြာ မြန်မာယူနီကုဒ်နဲ့ မို့လို့ ဇော်ဂျီ support မလုပ်ဖူး ထင်မှာစိုးလို့ပါ)။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ အပြင်ခြမ်း၊ အက်ဒ်မင် ဧရိယာ ပိုင်းတွေကိုပါ မြန်မာလို ပြောင်းလဲလို့ ရပါတယ်။ ပြောရရင် CMS တွေထဲမှာ SPIP ဟာ မြန်မာဘာသာ စကားကို တရားဝင် support လုပ်ပေးတာ ပထမဆုံးပါပဲ။ ပြင်သစ်ဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ဗီယက်နမ် စတဲ့ တခြားသော ဘာသာစကား အများအပြားကိုလဲ support လုပ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့တရားဝင်ဆိုက် ဖြစ်တဲ့ www.spipmedia.net (မြန်မာလိုလဲ ဖတ်လို့ရ) မှာလဲ သူ့ Level နဲ့သူ သရုပ်ပြ ရှင်းလင်း ထားတာကို ဖတ်ရှု နိုင်ပါသေးတယ်။ Continue reading →
Posted in Knowledge, Technology	| Tagged CMS, PHP, SPIP, Technology, web	|4Replies
Barcamp Yangon is available now!
Posted on January 3, 2010 by Phone Myint Khaing	Reply	Hi Everybody,We are lunching now Barcamp Yangon Website and You can register now.
Yes, Barcamp is freedom and not limited. Every participants can come and share their knowledge. But if you have desire to share your knowledge at Barcamp Yangon, you need to register for your topic. And We will give gift for the participants. eg. T-shirt and other gadgets. Barcamp doesn’t look like Seminar which are held by Geeks. Be feel freely, even attendees can discuss their topics. Wow! isn’t cool?
You can see detail on Barcamp Yangon Website. Date :January 23 and 24, 2010 Place : Myanmar Info Tech
Barcamp Yangon ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အွန်လိုင်းပေါ် လွှင့်တင်လိုက်ပါပြီ။ အခုပဲ register သွားလုပ်လို့ရပြီဗျို့။
ဘာကြောင့် register လုပ်သင့်သလဲ?
ဘားကမ့်ဆိုတာ လွတ်လပ်ပြီး ကန့်သတ်ချက် မထားတဲ့ ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက်တဲ့ မည်သူမဆို သူတို့ သိထားတဲ့ ဗဟုသုတတွေကို ပြန်လည် ဝေမျှပေးလို့ ရပါတယ်။ အကယ်၍များ သူငယ်ချင်းက ဘားကမ့်ရန်ကုန်မှာ ကိုယ်သိထားတာလေးတွေကို ပြောမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားရင်တော့ ကိုယ်ပြောမယ့် ခေါင်းစဉ်အတွက် register လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒိလို ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ကနေ စာရင်းပေးသွင်းပြီးသား လူတွေကို လက်ဆောင်တွေ ပေးသွားအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ တီရှပ်တို့၊ တခြား လက်ဆောင် ပစ္စည်းလေးတွေ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဘားကမ့်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ဖူးနေကျ တတ်သိနားလည်တဲ့ ဂုရုကြီးတွေ လုပ်တဲ့ စီမီနာ လို မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒိပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ သူတွေ ကိုယ်တိုင် လည်း ပြောနေတဲ့ သူတွေရဲ့ခေါင်းစဉ် အပေါ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးလို့ ရတယ်။ ကဲ ဘယ်လောက်မိုက်သလဲ။
ကျင်းပမယ့် အချိန်နဲ့ နေရာက
အသေးစိတ်ကိုတော့ Barcampyangon.orgမှာ ဝင်ရောက်ကြည့် ရှုနိုင်ပါတယ်။
နေ့ရက် ။ ။ ၂၀၁ဝ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ၊ ၂၄ (တနေကုန်နော်)
နေရာ ။ ။ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်
အခွင့်အရေးကို လက်မလွတ်စေနဲ့နော်။ ဘားကမ့်ကို ကမ္ဘာတဝှမ်းက နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ကျင်းပပြီးပြီ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ တော့ ဒါ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ပဲ။ ဒီတော့ သူငယ်ချင်းတို့ အတွက် နည်းပညာ အသစ်တွေ၊ ဗဟုသုတတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆက်သွယ်တွေ ရနိုင်တယ်နော့။ အခမဲ့ ဝိုင်ယာလက်စ် ကွန်နက်ရှင်လဲ ဘားကမ့်ရန်ကုန်မှာ ပေးထားအုံးမှာပါ။ ဒီတော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ လက်ပ်တော့ ဖြစ်ဖြစ် နုတ်ဘွတ်ခ် ဖြစ်ဖြစ် ယူလာလို့ရတယ်။ အဲ လက်ပ်တော့ မရှိလဲ မပူပါနဲ့ ဘားကမ့်မှာ သူငယ်ချင်းတို့ သုံးဖို့ PC တွေကို ထားပေးထားမှာပါ။
Barcamp အကြောင်း ပိုမို အသေးစိတ် သိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Barcampyangon.org နှင့် Htoo Tay Zar’s Blogတို့မှာ သွားရောက် လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
Posted in Announcement, Barcamp Yangon, Knowledge, News, Today Yangon	| Leaveareply
co.cc က သက်တမ်းကုန်တတ်သလား
Posted on March 9, 2009 by Phone Myint Khaing	10	co.cc အကောင့်ကို ကျွန်တော်လုပ်ထားတာ ဘယ်သူမှ သိပ်မသုံးခင် ၂၀၀ရ ခုနှစ် လောက်ကတည်းကပါ.။ အခုနောက်ပိုင်း co.cc ဟာ ဘလော့တွေမှာ အတော်လေး အသုံးများ လာတာ တွေ့ရပါတယ်..။ အခု ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ အကောင့်လေးက တနေ့က ကုန်သွားပါတယ်..။ သူက renew လုပ်ဖို့ ပြောပါတယ်။ ပိုက်ဆံတောင်းတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော် အံ့ဩသွားတယ်.ကျွန်တော့်အတွက်က co.cc က လျှောက်ကလိထားတာ ဖြစ်ပေမယ့် တခြားသော ဘလော့တွေမှာ ဒိုမိန်း တပ်ထားတဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သက်တမ်းကုန်သွားလို့ renew လုပ်ခိုင်းတာပါ..။သက်တမ်းတိုးဖို့ ပိုက်ဆံတောင်းနေပါတယ်..။
ဆိုတော့ co.cc အသုံးပြုသူများ လောလောဆယ် အလကား ဆိုပေမယ့် သက်တမ်း ကုန်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။ co.cc နဲ့ ဘလော့ ဒိုမိန်း တပ်သူများ ခင်ဗျာ.. သက်တမ်း မကုန်ခင် အလကား သုံးလို့ရမယ့် နောက်တခုကို ရှာကြည့်ကြပါအုံး..။ co.cc ဟာ တနှစ်ကျော်ရင် ပိုက်ဆံ တောင်းတဲ့ အကြောင်း အများသိစေရန် ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်..။
Posted in Knowledge, News, Technology	| 10 Replies
Font Download	Keyboard Download	Contact Me!	Email SubscribeGet Latest update via your emailRSS	Download Moe Oo Lay Pyay	Adsense	Useful URL
Ornagai Dictionary (en-mm,mm-en)
Books Catalog	Recent Posts	အခါလွန်ပိတောက်
Enough for idiots
မြန်မာတွေ ဆေးသောက်ကြပါ :P
Candy Crush :P
Gmail gave them special mail? :P
Phone Myint KhaingPromote Your Page Too
Barcamp Mandalay (1)
Barcamp Yangon (6)
Birthday Wish (9)
spectre’s song (4)
Thingyan(Water Festival) (8)
Today Yangon (71)
Why do I blog? (4)
UserOnline1 User Online	Recent CommentsCarole Wilson on ဧရာဝတီပြခန်းKo Zey on ကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့်အချိန်တွေကုန်နေကြပါလိမ့်နရီမင်းခင် on ကျွန်တော်နှင့် ဘားအံခရီးစဉ်ဘုန်းမြင့်ခိုင် on ကန့်လန့်ဖြတ်မျဉ်း တွေနဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ ကျွန်တော်Jia Li on ကန့်လန့်ဖြတ်မျဉ်း တွေနဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ ကျွန်တော်UserOnline1 User Online	Proudly powered by WordPress